Uncategorized – Good Health Journal
နစေ့ဉျဘဝမှာ အဆငျမပွမှေုတှေ အနညျးနဲ့အမြားဆိုသလို ရှိတတျပါတယျ။ ဘဝအမောတှကွေားမှာ ရုနျးကနျလှုပျရှား ရငျး စိတျဖိစီးတာ၊ စိုးရိမျသောကတှဖွေဈ တာ၊ ဝမျးနညျးပူဆှေးရတာ စတာတှေ လညျး ကွုံကွိုကျကွရပါတယျ။ ဘယျလို နညျးတှနေဲ့ ကြျောလှားနိုငျမလဲဆိုတာ ရှာ ဖှရေငျး ကိုယျရဲ့အမူအကငျြ့တှကေ စိုးရိမျ သောကတှကေို ပိုဖွဈစတောမြိုးလညျး ရှိ ပါတယျ။ ဘယျလိုအမူအကငျြ့တှကေ သငျရဲ့ စိုးရိမျသောကတှကေို ပိုဖွဈစသေ လဲဆိုတာ သိရှိပါရဲ့လား . . .။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမရှိခွငျး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက ခန်ဓာကိုယျ လှပစရေုံသာမက ပြျောရှငျတဲ့ခံစားခကျြ ကိုလညျး ဖွဈစပေါတယျ။ ကိုယျလကျ လှုပျရှားမှုမရှိတဲ့သူတှမှော ပြျောရှငျမှုလညျး ဆိတျသုဉျးနမှောပါ။ ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါ ဦးနှောကျက နေ ပြျောရှငျစတေဲ့ဟျောမုနျးတှေ ထှကျ လာစပေါတယျ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျမယျဆိုရငျ […]
Posted in: UncategorizedGood Health Journal	 February 10, 2020
ဗယျလငျတိုငျးအတှကျ ဖကျရှငျစဉျးစားရငျတော့ ဦးစား ပေးရမယျ့အရောငျ သုံးရောငျရှိပါတယျ။ အနီရောငျ၊ အဖွူရောငျ နဲ့ ပနျးရောငျတှဟော ဗယျလငျတိုငျးနကေို့ ကိုယျစားပွုတဲ့ အရောငျတှပေါ။ ဒီတဈပတျမှာ ဗယျလငျတိုငျးနကေို့ ကိုယျစား ပွုတဲ့အရောငျတှရေဲ့ အဓိပ်ပာယျကိုသိရှိပွီး Valentine’s Day Vibe ရစဖေို့ ရေးသားလိုကျပါတယျ။ (၁) အနီရောငျ အနီရောငျက ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ ရှငျသနျခွငျးတှကေို ကိုယျ စားပွုတဲ့အရောငျပါ။ လူသားမြိုးနှယျစတငျခဲ့တဲ့ အာဒံရဲ့နာ မညျအဓိပ်ပာယျဟာ အနီရောငျနဲ့မွကွေီးလို့ ဆိုပါတယျ။ သူဟာ လူသားတို့ရဲ့ ခဈြခွငျးတရားကို စတငျခံစားဖူးသူမဟုတျပါလား။ ဒါကွောငျ့ ဗယျလငျတိုငျးနမှေ့ာ ခဈြခွငျးတှနေဲ့ လှမျးခွုံထား တယျဆိုတာ ကိုယျစားပွုဖို့ အနီရောငျတောကျတောကျလေး ဝတျဆငျပါ။ (၂) အဖွူရောငျ အဖွူရောငျက သနျ့ရှငျးစငျကွယျခွငျး၊ ခှငျ့လှတျခွငျးတှေ ကိုကိုယျစားပွုပါတယျ။ အပွဈကငျးစငျတဲ့ ဖွူဖွူဖှေးဖှေး နှငျး […]
Posted in: Beauty, UncategorizedGood Health Journal	 February 10, 2020
စိတျဓာတျကတြယျဆိုတာ တကယျ တော့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဓာတုပစ်စညျးတှေ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ ဖွဈလာတာပါ။ ခန်ဓာ ကိုယျကို ကနျြးမာအောငျ ပွုပွငျထိနျး သိမျးပွီး စိတျဓာတျကနြတောတှကေို အဝေးသို့ မောငျးထုတျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ တဈနကေို့ မိနဈ ၃၀-၆၀ ကွာ လေ့ ကငျြ့ခနျးလုပျပါက စိတျဓာတျကလြက်ခ ဏာတှဖွေဈပှားမှုမှ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။စိတျဓာတျတကျကွှစတော၊ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိစတောတှအေပွငျ ကငျ ဆာရောဂါ၊ သှေးဖိအား မွငျ့မားစတော၊ နှလုံးရောဂါဖွဈစတော စတဲ့ ဖိစီးမှုတှကေို လညျး လြော့နညျးစပေါတယျ။ ယောဂကငျြ့ပါ လလေ့ာမှုတှမြေားစှာအရ ယောဂ ကငျြ့တာက စိုးရိမျသောကဖွဈတာ၊ ဒေါ သဖွဈတာ၊ စိတျဓာတျကတြာတှကေို အဝေးကိုမောငျးထုတျနိုငျတယျလို့ တှရှေိ့ ခဲ့ပါတယျ။ စိတျကနျြးမာရေးခြို့တဲ့နသေူ တှအေနနေဲ့ ယောဂကငျြ့ပါက ဆေးဝါး တှရေဲ့ အာနိသငျတှကေို ပိုမိုကောငျးမှနျ […]
Posted in: UncategorizedGood Health Journal	 January 24, 2020
ကျွန်မတို့ဟာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ ကွမ်းယာဆိုင်က စပ်ပေးတဲ့ စပ်ဆေးတွေကို ပြီးစလွယ် အသုံးပြုတတ် ကြပါတယ်။ ရောဂါမကြီးမားခဲ့ရင်တော့ ဒီဆေးဝါးတွေနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပေမယ့် တချို့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတော့ ဒီဆေးဝါးတွေအသုံးပြုပြီး လျစ်လျူမရှုထားသင့် ပါဘူး။ ရောဂါတွေဟာ နုစဉ်အခါမှာ ကုသရင် ပျောက်ကင်းဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် အခြေ အနေဆိုးရွားမှ ကုသခဲ့ရင် အပ်နဲ့ထွင်းရမယ့်နေရာမှာ ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ရသလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါလက္ခဏာတွေက လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သတိပေး တဲ့အချက်တွေပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်အတက်အကျမြန်ခြင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်က တစ်သမတ်တည်း တည်ငြိမ်နေတာက ကျန်း မာနေတယ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် အလေးချိန်အတက်အကျမြန်လွန်းတာက ကျန်းမာ ရေးပြဿနာဖြစ်နေနိုင်ပါပြီ။ ရုတ်တရက်ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်မြင့်တက်လာတာက သင့်မှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကျန်းမာရေးပြဿနာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်စိတ် များတာလိုမျိုး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်နေပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 April 30, 2019
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီး အ ရွယ်တင်နုပျိုနေဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်သန်မာပြီး စိတ်ဓာတ်ကြည်လင် သန့်ရှင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုင်ထ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာက ဒီလိုအခြေ အနေတွေဖြစ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ? သင့်ခြေထောက်နှစ်ခုကို ပခုံးအ ကွာအဝေးအနေအထားလောက်ကား ထားပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ထိုင်ခုံတစ်ခုပေါ်မှာ ထိုင်ချတဲ့ပုံစံ လိုမျိုး ဒူးခေါင်းကို ၉၀ ဒီဂရီကွေးပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ။ ဒူးခေါင်းပဲ ကွေးရမှာဖြစ်ပြီး ခါး၊ လည်ပင်းနဲ့ မျက်နှာ တွေက မတ်မတ်အနေအထားမှာ ရှိနေရ ပါမယ်။ သင့်လက်တွေကို မြေကြီးနဲ့အပြိုင် ဆန့်ဆန့်ထားပါ။ မတ်မတ်ရပ်အနေအထားအတိုင်း ပြန်နေပါ။ လုပ်ခါစမှာ တစ်ကြိမ်ကို အခါ ၂၀ နှုန်းနဲ့ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်သွားပြီး တဖြည်းဖြည်း လုပ်ရမယ့်အရေအတွက် ကို တိုးသွားပါ။ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာကြောင့် […]
Posted in: Health Tips, Medical Knowledge, UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 February 11, 2019
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူ တွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံက အရေပြားပြဿနာ တွေ ဖြစ်ပွားတတ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာ အများစုကို နေ့စဉ် အရေပြားထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားပမာဏကို ပုံမှန် ဖြစ်အောင် ထိန်းပါ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်များနေတာ က အရေပြားခြောက်သွေ့တာ၊ ကွဲအက် တာတွေ ဖြစ်စေပြီး ပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက် ဖို့ တံခါးဖွင့်ပေးနေသလိုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ရောဂါပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင် လည်း ခန္ဓာကိုယ်က တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ အလွန်ပဲ ခက်ခဲပါတယ်။ သင့်မှာ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါရှိပါက သွေးတွင်းသကြား ဓာတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းတာ၊ အ ရေပြားဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အစိုဓာတ် ဖြည့်ပေးပါ ပုံမှန်အစိုဓာတ် ဖြည့်ပေးပါက အ ရေပြား ခြောက်သွေ့မှု […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 February 6, 2019
နှလုံးကျန်းမာရေး၊ အရိုးအဆစ်နဲ့ ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်တတ်ကြ ပေမယ့် အသည်းကျန်းမာရေးကိုတော့ လျစ်လျူရှုမိတတ်ကြပါတယ်။ အသည်း က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစာခြေစနစ်မှာ အရေး ကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတာကိုတော့ သိစေချင်ပါတယ်။ သင်စားလိုက်တဲ့ အ စားအသောက်တွေ၊ ဆေးတွေအကုန်လုံး ဟာ အသည်းကို ဖြတ်ရပါတယ်။ အ သည်းကိုလည်း ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက် မှ သူ့အလုပ်သူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းပျက်စီးပြီဆိုရင် လည်း ပြန်ကောင်းဖို့က မလွယ်တော့ပါ ဘူး။ အသည်းဆိုတာ … အသည်းက ညာဘက်နံရိုးအောက် မှာရှိပြီးတော့ ဘောလုံးတစ်လုံးအရွယ် လောက်ရှိပါတယ်။ အသည်းက ခန္ဓာကြီး ကောင်းစွာလည်ပတ်ဖို့ ကူညီပေးနေတဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထဲက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းတွေကို သန့်စင်ပေးတာ၊ အဆီ တွေချေဖျက်ဖို့ သည်းခြေရည်ထုတ်ပေး […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 October 15, 2018
ငါ ဘာကြောင့် အရေပြားတွေ ယားနေရသလဲ?
အရေပြားယားယံတာက အလွန်နေရခက်ခဲပြီး မကြာခဏ ကုတ်ခြစ်ချင်နေနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အသားအရေခြောက်သွေ့တာကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အသက် ကြီးသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပြီး အသက်ကြီးတာနဲ့အမျှ အရေပြားခြောက်သွေ့နှုန်းက လည်း ပိုများလာပါတယ်။ အရေပြားယားယံရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး အရေ ပြားဟာ ပုံမှန်အနေအထား ဒါမှမဟုတ် နီရဲနေတာ ဒါမှမဟုတ် အဖုအပိမ့်တွေ ပေါက်တာ ဒါမှမဟုတ် အရည်ကြည်ပေါက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏ ကုတ် ခြစ်တာကြောင့် အရေပြားမှာ သွေးထွက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါပိုးဝင်တာလိုမျိုး ဆိုး ကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ယားယံပျောက်လိမ်းဆေး၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်တွေကို အသုံးပြုတာအပြင် ရေအေးနဲ့ ရေချိုးတာက အရေပြားယားယံတာကို သက်သာစေ နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ .. ♦ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း အသက်ကြီးတာကြောင့် ဖြစ်တာ၊ လေ အေးပေးစက် ဒါမှမဟုတ် လေပူစက်ကို ရေရှည်အသုံးပြုတာနဲ့ […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 April 24, 2018
စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအစာနဲ့ ဓာတ်မတည့် ဖြစ်တာမျိုးကို တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်က ထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်က ပြင်ပက၀င်လာတဲ့ ဓာတ်ကို တုံ့ပြန်တာကြောင့်ပါ။ ဂျုံ၊ မြေပဲ၊ ခရုကမာ၊ အသား၊ ပုစွန်၊ သကြား၊ ဂလူ တန် စတာတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်တာဖြစ်တဲ့အခါ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက အနီစက်ထွက်တာ၊ ပျို့အန်တာ၊ ယားယံတာ၊ အသက်ရှူကျပ်တာနဲ့ ဖျားနာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေက အစာနဲ့ ဓာတ် မတည့်ဖြစ်တတ်သူတွေအတွက် ကုန်ကျမှုသက်သာပြီး လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းတွေပါ။ ငှက်ပျောသီး စားပါ ငှက်ပျောသီးက ဓာတ်မတည့်တာ အတွက် အိမ်သုံးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ အစာအိမ်နာတာ၊ အရေပြားမှာ အနီစက်ဖြစ်တာတွေကို ကာကွယ်၊ ကုသ ပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ငှက်ပျောသီးစားတဲ့ အလေ့အကျင့်က အစားအသောက်ကြောင့် […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentGood Health Journal	 February 14, 2018